I-Quaint 1884 ikhaya lezitini elingaphakathi kwebanga lokuhamba kalula lomtapo wolwazi, i-WNMU, izindawo zokudlela ezimaphakathi nedolobha, i-co-op, nokuhamba ngezinyawo e-Boston Hill. Indawo enhle phakathi ne-Tour of the Gila (phezulu kwegquma ku-criterium course!) noma uhambe uye ku-Blues Fest. Jabulela inkomishi yakho yekhofi yasekuseni elangeni kuvulandi ongaphambili. I-grill futhi ube nesidlo sakusihlwa somndeni kuvulandi engemuva. Sithemba ukuthi le ndlu ikuvumela ukuthi ujabulele impilo ehamba kancane kanye nesizinda sasekhaya esinethezekile ukuze uhlole ubuhle bemvelo, ubuciko, noma izilwane zasendle zendawo.
Ngicela ukhululeke ukungithumelela umyalezo mayelana nezinyathelo zokuphepha ze-COVID-19. Ngingakugcwalisa ngezinqubo zethu zokubhukha nokuhlanza ngalesi sikhathi.
Igumbi lokulala elilodwa linombhede wendlovukazi kanti igumbi lesibili linombhede ogcwele, womabili anamakhethini afaka mnyama igumbi. Ilungele imibhangqwana noma umndeni omncane. Umbhede we-aero osayizi ababili kanye namalineni engeziwe nawo ayatholakala.
Ikhishi lihlome ngokuphelele ngezitsha, izitsha, amapani, umenzi wekhofi, nezinto ezibalulekile zokupheka (uwoyela, usawoti nopelepele, njll). Khona kanye endaweni yasekhishini kunewasha. I-dryer itholakala egaraji, elingaphandle komnyango ongemuva futhi lehle ngezinyathelo ezimbalwa.
Igumbi lokugeza ligcwele i-shampoo, insipho, amathawula nezinto ezibalulekile. Ishawa yokungena kalula inezindawo zokubamba kanye nezihlalo zeshawa.
I-WiFi endlini yonke. Ukushisa okuphakathi. Amayunithi ewindi le-AC ezinyangeni ezishisayo. Asinayo i-TV futhi sithemba ukuthi unokuningi ongakwenza ukuze ungaphuthelwa! Kukhona umsakazo omncane onamandla we-Bluetooth ne-USB ukuze usakaze izingoma zakho ozithandayo.
I-patio engemuva ebiyelwe futhi yangasese inendawo yokuhlala kanye ne-propane grill.
Indawo yokupaka isemgwaqweni futhi yabelwa abanye omakhelwane. Sicela upake kuphela phambi kwendlu.
Ngizotholakala ngombhalo ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sihlala kwamakhelwane kodwa ungakhathazeki, siyabuthokozela nobumfihlo bethu!
Hlola ezinye izinketho ezise- Silver City namaphethelo